‘मरेको शरिर चितामा जलाइसकेपछि उठेर आउने भए प्रिय श्वेता म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुने थिए होला‘ – live 60media
‘मरेको शरिर चितामा जलाइसकेपछि उठेर आउने भए प्रिय श्वेता म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुने थिए होला‘
काठमाडौ । अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह गर्दैछन् । उनले आफ्ना वेहुलासंगको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । विवाहकै दिन श्वेताले मेहन्दी लगाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । जुन तस्बिरमा उनका बेहुला देखिन्छन् । श्वेताले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा कमेन्ट गर्दै नायक नजिर हुसेनले एउटा कमेन्ट गरेका छन् जुन अहिले भाइरल भएको छ । जुन कमेन्ट तल पढ्नुहोस
मरेको शरिर चितामा जलाइसकेपछि उठेर आउने भए प्रिय श्वेता म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुने थिए होला ।अग्नि साचि राखेर केहि आफन्त हरु समेत लाइ दर्शक राखेर सात फेरा हालेर जुनि जनि सम्म साथ दिने कसम खादा त म पनि थिए नि । तर बिडम्बना मैले त बाचा पुरा गर्न सकिन नि ।
मैले धर्तिमा आएपछि पक्कै पनि सुन्ने छु होला । मेरो मृत् शरिरमा तिम्रा ति निर्दोष आखाबाट खसेका बलिन्धारा आशु कति थियो भनेर । आफ्नै ज्यान नियन्त्रणमा लिन नसकेकि तिमि मेरो मायामा पागल भएर यसो भनेको थिइ नि यसले भनेर सुन्छु होला सुनाइन्छ होला । ” म अब कोहि सग बिहे गर्दिन”” यो शब्द पनि मैले सुन्छु होला ।
तिम्रो हरियालि जिन्दगिलाइ उजाड बनाउने म अझै पनि मलाइ नै सम्झेर बसेकि छ्यौ होला । अमुल्य जिबनको धेरै बर्ष मेरा नाममा तिम्रा आखा बाट खसेका आशुको मुल्य म कसरि तिरोरुरुरुहात पाखुरा गलेका तिम्रा ति अङ्गहरु सग मैले कसरि माफि मागौ । मलाइ पनि अनुभव गर्न मन छ !!
पापको सजाय पाउन मन छ !! सगै सगै जिन्दगि कटाउछु भनेर बाचा कसम खाएको मान्छे एक्कासि बिच बाटो बाट नै अलपत्र हुदा कस्तो र कति पिडा हुन्छ त्यो मलाइ अनुभव गर्न मन छ । तिम्रो ठाउमा म भएको भए !! केहि समय पछि बिर्सने थिए होला । अर्कै सग फेरि सात जुनिको कसम खाएको हुने थिए होला । तिमिले त कसरि सक्यौ !!! यतिका बर्ष सम्म मृत शरिरलाई सम्झेर !!! कति मन अमिलो बनाएर अझै एक्लै पिडा सहेर बस्छ्यौ ।
म त तिमिलाई” धर्तिमा आउन मिल्न भए यो भन्ने थिए””” गर बिहे । यत्रो दिन सम्म एक्लै पारेको तिमिलाई समाजमा लाग्ने लाल्छान सबै म खान तयार छु !!! तिमिलाई यदि कुनै पाप लागेछ भने म भोग्न तयार छु !!! कम से कम मेरो पापको भारि कम होला !!!
तिम्रो बिहेमा त मेरो आखाबाट केहि दिन सम्म आशु झर्ला !!! तर तिमिले मेरो नाममा यतिका बर्ष सम्म झारेका आशुको अगाडि सायद धेरै नै कम नै हुन्छ होला । सगेै जुनि कटाउछु भनेर खाएको कसम तोडिका कस्तो हुन्छरुरुरु त्यो अनुभन मैले पनि पाउनु पर्छ ।
एक्लै यतिका दिन सम्म एक्लै हुदा कस्तो हुन्छ त्यो मैले पनि भोग्न पर्छ । त्यसैले स्वेता गर बिहे बितेको पिडालाइ भुल्न बर्तमान मा खुसी हुन र भबिस्यमा उत्कृष्ट कार्यको सुरुवात को निम्ति हजुर लाई बधाई सफल जिवनको शुभकामना ।
← मनीषाले पे’ट्रोल छ’र्किएर बा’लिन् आ’गो, श्रीमान पेट्रोल महंगो छ भन्दै जिस्क्याउँदै भिडियो खिचिरहे
दुई दिन भित्र तपाईंको काम बन्नेछ ,बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु=> →